New fomba amam-panao Policy! Manehoa Fitsipika fanovana amin'ny Import & Export! - China Longkou Fushi fonosana
China fomba amam-panao dia namoaka Order No.56 hanitsy mampihiditra ny hanehoana fitsipika izay hitondra vokany eo amin'ny 1Te Jona, 2018.
Misy fanovana natao teo amin'ny Mivoaka aseho mialoha, ohatra:
1.The tanteraka sy marina entana vaovao dia tsy maintsy atolotra ny China fomba amam-panao elektronika 24 ora mialoha ny Loading tao an-tsambo sambo nandeha sambo nankany / amin'ny alalan'ny / avy amin'ny Sinoa seranana.
2.Shipper ny HETRA ID, shipper ny Antsoy ny laharana, ny orinasa anaran'ny olona andefasana entana toy ny antontan-kevitra lehibe ao amin'ny talohan'ny miharihary dia nanitsy ho maintsy saha.
3.All entana vola taratasy ambany ny entana dia tsy maintsy hambara amin'ny miharihary tanteraka sy araka ny marina. China fomba amam-panao dia hametraka Ratsy Lisitry fitantanana ny nambara entana. Any in-mifanaraka amin'ny fomba amam-panao lalàna dia holavina
Maro fandefasana orinasa no namoaka filazana mifandraika ihany koa. Ary ny mpanjifa dia ny manome marina sy tanteraka toromarika fandefasana entana teo anoloan'ny tahirin-kevitra nendahina-eny ny fotoana araka ny nivoaka tao amin'ny fandefasana entana orinasa tranonkala.
Inona no fiovana ho fanitsiana io hitondra?
Ary ny entana nafarana ho any amin'ny tanibe Shina, na transited alalan'ny tanibe Shina, feno sy marina tsara ny fanazavana miharihary ny entana dia tsy maintsy halefa any Shina fomba amam-panao amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra elektronika 24 ora alohan'ny fandefasana, June 1, 2018.
Inona no hevitry ny marina tanteraka sy hanehoana angona?
Ny anaran'ireo rehetra cargos ambanin'ny volavolan-dalàna ny entana dia nanambara mazava tsara sy tanteraka teo amin'ny miharihary, ary ny angon-drakitra zavatra ho amin'ny fanitsiana ny vaovao miseho dia ahitana:
1.USCC ny consignor
2.Phone isan'ny consignor
3.Enterprise Code ny shipper
4.Name ny olona andefasana entana (na hanoratra "mba hampiorenana" amin'ny toe-javatra manokana)
5.USCC ny olona andefasana entana (Raha toa ny olona andefasana entana dia ny "Order", dia tsy ilaina USCC)
6.Phone isan'ny olona andefasana entana (Raha toa ny olona andefasana entana dia ny "Order", dia hifandray vaovao dia tsy ilaina)
7.Name ny consignor (na hanoratra "mba hampiorenana" amin'ny toe-javatra manokana)
8.Enterprise Code ny olona andefasana entana
9.USCC ny hampandre antoko no ilaina raha toa ny olona andefasana entana dia ny "Order".
10.Phone isan'ny antoko hampandre no ilaina raha toa ny olona andefasana entana dia ny "Order"
Moa ve ny fandikan-dalàna ao amin'ny Manehoa Fling ho voasazy?
Ôrdônansy sazy no napetraky ny fomba amam-panao momba ny fandikan-dalàna eo amin'ny famenoana miharihary. Name ny ôrdônansy dia "ny fampiharana ôrdônansin'ny Administrative sazy ny fomba amam-panao ao amin'ny Repoblika Entim-China", izay no nivoaka sy mahomby tonga tamin'ny 2004.
Ve ny fomba mitarika ho amin'ny fampiharihariana ny hevitry ny mpanjifa 'vaovao?
Ny paika ny vaovao miseho fanitsiana dia tsy mitarika ho amin'ny mpanjifa ny fampiharihariana ny hevitry 'raharaham-barotra vaovao saro-pady.
Angon-drakitra entana mora koa ny hita (afa-tsy ny anaran 'ny olona andefasana entana) dia tsy hita ao amin'ny volavolan-dalàna ny entana navoakan'ny mitondra. Taorian'ny aseho dia naniraka tany amin'ny fomba amam-panao, ny fomba amam-panao mpiasa dia tsy maintsy miaro ny ara-barotra zava-miafina sy ny zava-miafina manan-danja ny fomba amam-panao asa araka ny lalàna.
Ny Jona 1 dia manodidina an-jorony, mba ho azo antoka ny entana mandeha amin'ny alalan'ny fomba amam-panao hampandeha tsara, masìna ianao, tandremo ny amin'ny fanoratana ny vaovao miseho, ka tandremo ny entana tsy ho notazonina!
Post fotoana: Jul-12-2018